Mootummaa Wayyaanee raayyaa ittisa biyyaa jedhe beeksisa baasee jiraachuun beekame. | QEERROO
Mootummaa Wayyaanee raayyaa ittisa biyyaa jedhe beeksisa baasee jiraachuun beekame.
Posted on September 25, 2017 by Qeerroo
Fulbaana 25,2017/ Namoota haalli jireenyaa rakkisuudhaan gara wallaalchise walitti guuree raayyaa ittisa biyyaa jechuun dargaggoo funaanaa kan ture mootummaan abbaa irree Wayyaanee, har’as itti fufuudhaan dargaggootaaf beeksisa baasee akka jiru odeeffannoon kutaalee Oromiyaa adda addaa keessaa arganne ifoomsee jira. Dargaggoonni Oromoo carraan barnootaa isaan rakkisuufi haalli jireenya hawaasummaa isaanitti ulfaachuudhaan tarkaanfii raayyaa ittisa mootummaa wayyaanee ta’uudhaan hojjechuu ofirratti fudhataa akka turan namui quba qaba. Akkuma baroota darban irraa hubachuu dandeenyutti, ilmaan hiyyeessaafi harka qalleeyyii barnoota gahaa hin qabne funaanuun leenjii waraanaa kennee uummatyma ofiitti bobbaasuudhaan hojii diinummaa akka hojjetan taasisaa kan ture mootummaan Wayyaanee, yeroobammaa kanas hojii kanaaf carraaqaa akka jiru madden eeraniiru. Dargaggoota Oromoo gara humna waraanaatti fiduudhaaf tooftaa adda addaa fayyadamaa kan turte mootummaan Wayyaanee, tooftaa kanaanis milkaa’aa turteetti. Karaa itti dargaggoonni Oromoo gara leenjii waraanaatti seenuun humna ittisa wayyaanee ta’an keessaa tokko, dargaggoota biyya keessaa nageenya booressitan jechuudhaan
adamsanii akka daegaggoon jiraachuu jibbu taasisuudhaan tarkaanfii kana akka ofirratti fudhatan taasisaa turteetti. Akkasumas, dhiibbaa garaagaraa dargaggoorratti gochuudhaa, bakka barbaachisetti sossobuudhaan Oromoon akka Oromoo miidhu taasisaa turteetti. Shirri mootummaa wayyaanee kun fashalaa’uudhaan dargaggoonni Oromoo dhimmi Oromummaatiif akka hojjetan jechuun qeerroon bilisummaa dhaammataniiru.
Dargaggootni Oromoo yeeroon kun yeeroo Wayyaanee irratti duulan malee yeeroo humna Waraanaa Wayyaanee jabeessaan miti waan ta’eef, gocha kanarraa of qusachuudhaan mootummaa wayyaanee dhabamsiisuuf akka hojjetan jenna.
Wayyaanee qormaata biyyoolleessa barattoota kufisun yeeroo namni mira Aarii keessaa jiru beeksiisaa bastee human waraanaa fi Poolistii ijoollee keenya naqxee achii keessaatti tooftaa Wayyaanee lubbuu dheeressu hojjechiisuudhaan namoota gaaffii mirgaa gaafatan ukkaamsisaafi ajjeesisaas jirti. Dargaggoonni Oromoo gara raayyaa ittisaa wayyaaneetti gaafa makamtanii kaastanii hojii diinummaa ilmaan Oromoorratti waan hojjettaniif, diina Oromoo waliin diinomsamuu keessan hubattanii akka of qusattaniifi Qeerroon dhiimma kana irratti dammaqee Oromoo kan ta’e namni tokko galma’uu akka hin qabne dhaamsa Oromummaa dabarsina. Qabsoo keenya jabeessiinee yeeroo itti meeshaa Wayyaaneetti galgachan malee barrii Wayyaaneef meeshaa ta’aniif hafera. Kanaafuu qeerroon biyya keessaa caasaa Qeerroo ABOtiin ijaarame Qeerroo bilisummaa Oromoo jalattihiriiruun hojii boonsaa hojjetamaa jiru akka itti fufsiistaniifi mootummaa garboomfattuu wayyaaneetti xumura gochuuf akka carraaqxan dhaamsa Oromummaa isiniif dhaamna!